AMISOM oo soo dhoweysay in baaritaan lagu sameeyo diyaaraddii ku dhacday Bardaale – Geelle Magazine
War saxaafadeed ay soo saartay AMISOM, ayey ku sheegtay in ay soo dhawaynayso go’aanka ay dowladaha Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya ku baarayaan diyaaraddii ku burburtay degmada Bardaale ee gobolka Baay.
“Waxaan jeclaan lahayn inaan taageeraheenii soo jireenka ahaa aan u muujinno dowladaha Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya, waxaana diyaar u nahay inaan ka caawinnno wax walba oo baaritaanka u jeedkiisa ah ee ku aadan dhacdadan” ayuu yiri Madaxa Howlgalka Ciidamada AMISOM, Francisco Madeira.
Diyaarad sidday agab loogu talagalay ka hortagga Covid 19 ayaa ku dhacday magaalada Bardaale ee gobolka Baay. Inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn sababta ay diyaaradda u burburtay, balse waxaa soo baxay warar sheegaya in lasoo riday.
Lix qof oo diyaaradda saarnaa ayaa geeriyootay, sida uu sheegay Wasiirka Gaadiidka Soomaaliya.
Dadka dhintay waxay isugu jireen muwaadiniin Soomaali ah iyo kuwo Kenyan ah.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in uu Madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta iyo qoysaska dhibbanayaasha u xaqiijiyey in ay billaabeen baaritaanka oo si rasmi ah ay u hoggaamineyso Wasaaradda Duulista Hawada Soomaaliya.
“Madaxweynaha wuxuu sidoo kale soo dhoweynayaa dhammaan hay’adaha iyo dowladaha doonaya in ay kusoo biiraan baaritaanka”, ayaa lagu yiri war qoraalka ah oo kasoo baxay villa Somalia.
“Waxay dowladdu bixineysaa wada shaqeyn iyo taageero aan xadidneyn oo buuxda”.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ballan-qaaday in dowladda Soomaaliya ay sare u qaadeyso bad-qabka diyaaradaha gargaarka iyo adeegyada aasaasiga ah ee xilligan lagu guda jiro saameynta ka dhalatay cudurka Covid 19.